Madaxda Dunida Muslimka oo si caro leh uga jawaabay go’aanka Madaxweyne Trump – Radio Muqdisho
Hogaamiyaasha Dunida Muslimka ayaa si caro leh uga jawaabay go’aanka ka soo baxay madaxweynaha Mareynkanka Donald Trump ee magaalada Qudus ugu Aqoonsaday caasimadda rasmiga ah ee Israa’il.
Mareynkanka ayaa doonaya in Safaaradiisa uu ka soo raro Tel Aviv una soo raro Jerusalem,waxaana sidaasi Khudbadiisa ku cadeeyay madaxweyne Trump oo Telefishinka ka hadlayay.
Halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa sida Hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa Dunida Muslimka ugu jawaabeen Go’aanka Trump:-
Michel Aoun, madaxweynaha Lubnaan ,ayaa sheegay in go’aanka Mareynkanka uu yahay mid qatar gelinaya hanaanka Nabad galyada iyo xasiloonida Bariga dhexe.
Sidoo kale, Dowladda Jordan oo war ka soo saartay Go’aanka Trump ayaa ku tilmaantay mid sharcidaro ah oo xaqsiinaya dhulka ay Isra’il xooga kaga heysato Falastiin ee Bariga Jeruslem.
Wasiirka Arimaha Dibada Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa sheegay” In go;aanka Trump uu gaaray yahay mid ciqaab dhimasho ku ah dhamaan dadaalada nabada lagu doonayo iyo Qatar hor leh oo soo wajahda Bariga dhexe”.
Jeremy Corbyn, oo ah hogaamiyaha Xisbiga Shaqada ee dalka UK, ayaa ugu yeeray go’aanka Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimada rasmiga ee Isra’el mid qatar ku ah Nabada.
Benjamin Netanyahu, Ra’iisal wasaaraha Israel,ayaa sheegay in maalin taariikhi u tahay wadanka.
Hay’adaha u dooda xuquuda Aadanaha ayaa cambaareeyay go’aanka ka soo baxay Madaxweyne Trump ee uu ku muujiyay in Qudus ay tahay caasimada rasmiga ah ee Isra’el.
Dowladda F. S. oo deeq Dawo ah ka guddoontay Sucuudiga+Sawirro